I-China i-Smart Mirror kunye nesibuko somlingo I-LCD yokubonisa igumbi lokuhlambela / igumbi lokulala / igumbi lokuhlala LS320M ifektri kunye nabavelisi | Layson
Isibuko esiSmart esinesibuko somlingo se-LCD sokubonisa igumbi lokuhlambela / igumbi lokulala / igumbi lokuhlala LS320M
1.Umboniso we-LCD wokuqala
2.Ubungakanani besipili esilungiselelweyo
3.Isisombululo: 1920×1080 okanye 3840×2160
4.OS inkqubo: Android OS okanye Windows OS
5.Umsebenzi owenziwe ngokwezifiso: Ikhamera eyakhelwe-ngaphakathi, iMicrophone eyakhelwe-ngaphakathi, ukukhanya kwe-LED, njl.
Uhlobo lwe-6.Ufakelo: Udonga lufakwe okanye i-Floor stand
Ukuhlangabezana neemfuno ezikhulayo zabathengi bethu, sinikezela ngoluhlu olukhulu lomgangatho ophakamileyo woMboniso weMirror weMirror owenziwe kusetyenziswa izinto ezikumgangatho weprimiyamu ezikrwada kunye netekhnoloji ephucukileyo ehambelana nemigaqo yamva nje yemizi-mveliso. Ivumela ngokulula ukutshintsha imifanekiso. Umboniso weMirror womlingo uyafumaneka ngobukhulu obahlukeneyo njengoko kufuneka. Siqinisekisa ukuba sibonelela ngesi sipili esisemgangathweni kubathengi bethu ngamaxabiso aphantsi. Ngaphaya koko, sipakisha oku kweyona mathiriyeli yokupakisha esemgangathweni ukuqinisekisa ukuhanjiswa okukhuselekileyo ngexesha lokuhamba.
Olu hlobo lwe-Smart Mirror lusebenzisa iglasi ekhethekileyo yesibuko njengephaneli yephaneli, enokusetyenziswa kungekuphela nje ukujonga esibukweni, kodwa nokubona isikrini sentengiso esiboniswe kwisibuko. Yamkela inkqubo ye-vacuum magnetron esebenzayo yokutshiza, ecutshungulwa ngokubonakaliswa kwesipili kumphezulu weglasi. Isipili esikrelekrele siso kanye—sisipili esikrelekrele. Kanye njenge-smartphone yakho, ezi zibuko ziqhagamshela kwi-Wi-Fi, zineekhamera ezakhelwe ngaphakathi, kwaye zinelizwi. Banikezela ngamava amatsha ngokupheleleyo kwaye asebenzisanayo . Ikwaza nobomi benkonzo ende, itekhnoloji ephucukileyo, ufakelo olulula, uyilo olucekethekileyo kunye neendleko zokugcina eziphantsi. Ifanelekile kwii-villas, iiklabhu zabucala, izikhululo zeenqwelo moya, izikhululo zikaloliwe ezihamba ngesantya esiphezulu, amaziko endibano, iimyuziyam, iivenkile ezinkulu, iifilimi, iihotele zeenkwenkwezi, njl.
Umgangatho oMisa isipili somlingo
Ubomi bonke : ≥ 50,000 iiyure
Ukungachukumisi / Ukuchukumisa amandla
IsiTshayina, isiNgesi, iSpanish, isiRashiya, isiJamani, isiFrentshi, isiArabhu njl.
Mnyama kunye nesilivere
Inkqubo yokusebenza: Android 5.1/6.0/7.1
CPU: Intel i3/i5/i7 Memori:4G/8G/16G SSD:128G/256G/512G
HDD: 500/1TB Operate System: win 7/ win 10
2*USB2.0 ,2*USB3.0, RJ45,Audio, HDMI ngaphandle, DC, VGA , I/O iqhosha
2 * USB, Mini USB, RJ45, SD slot, Audio, I / O iqhosha
Ngaphambili: Isipili esiSmart esineSkrini sokuTonga, uMboniso weMirror weMirror weglasi weLCD weBathroom/Bath/Makeup/Fitness/Gym/Hotel/Smart Home
Okulandelayo: Isixhobo sokuhambisa isicoci sesandla esizenzekelayo esine-21.5 intshi ye-LCD yeNtengiso ye-Digital Signage LS215A
© Copyright - 2010-2021 : Onke Amalungelo Agciniwe. iveliso ezifakiwe, Imephu yesiza, Udonga lweVidiyo yoMqondiso weDijithali, Imiqondiso yeDijithali yeSikolo, Intengiso yeTouch Screen Kiosk, Dooh Umqondiso weDijithali, Itheyibhile yeDiy Touch Screen, Imiqondiso yeDigital Directory, Zonke iimveliso